အမေစုရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » အမေစုရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်
Posted by captainamerica on Mar 5, 2012 in Computers & Technology, Know-How, DIY | 14 comments
အမေစုရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်ကို ဗီဒီယိုဖိုင်တင်တာတင်လို.မရဖြစ်နေလို. ဖိုင်ဆိုဒ်ကသိပ်လည်းမများပါဝူး ၁၈၂ မီဂါဘိုဒ်ပဲရှိတာကိုတိုင်ပတ်နေလို.
Zayyar oo has written 11 post in this Website..
အတွေးအခေါ်ကောင်းပီး ကိုယ်နိုင်ငံ တကယ်တိုးတတ်အောင်လုပ်မဲ့လူတွေ များများပေါ်ထွန်းလာပါစေလို.ဆုတောင်းပါတယ်။မည်သည့်ကိစ္စ မဆိုအတွေးအခေါ် အပြုအမူ အစွန်းရောက်သူများကျဆုံးပါစေ။
View all posts by captainamerica →
How- to do ထဲမှာဖတ်တာလည်းမတွေးဝူး။တော်တော်ထူပါတယ်ဗျာလူကလဲ
ဇွဲမလျှော့နဲ့ရဲဘော် ၊ အနော် စောင့်မျှော် အားပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ။
ရွာထဲဝင်တာလည်းနှစ်ပေါက်နေဘီ ရှက်ထှာ အစက I-Pod နဲ.ရိုက်လာခဲ့တာမပေါ်ပြန်ဖူး
ပေါ်လာလို.တင်ကြည့်တော့လည်းအဆင်ကမပြေ ၂မိနစ် ၃မိနစ်စာလေးနဲ.
်File format ကို flv format ပြောင်းတင်ပါ။ size သေးသွားလိမ့်မယ်။ file converter နဲ့ ပြောင်းလိုက်ပါ။
နာမည် စီး သွားတာထင်ရဲ့။ jk
အော် အမေရိကန်ငတုံး တဲ့ နာမည်လေးက လှသားနော်…
တင်ထားတင်ထား ဒီလိုကော်နက်ရှင်နဲ. 182MB ကို တင်တာ တော်တော် သတ္တိရှိတယ်နော်…
ကျွန်‌တောအိမ်က ကွန်နက်ရှင်ကိုယုံလို.တင်ကြည့်တာပါ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ.တစ်ညလုံး
သြူကီးေ ပြာတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါဘီ ;-)
သိပ်မများပါဘူး ၁၂၈MB ပဲဆိုပါလား။ (မြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ရင်တော့မများပါဘူး)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုဗ္ဗသီရိတွင် စတင်ဟောပြောနေပြီ
ပြည်သူအများစုက ဥပဒေဆိုတာ ငါတို့ကို နှိပ်စက်ဖို့လို့ထင်နေကြတယ်။ ဥပဒေဆိုတာ ပြည်သူကို ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကနေ ၀င်ပြီးတော့ လွှတ်တော်အတွင်းက ပြည်သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတွေ ပြဌာန်း ရေး၊ ပြည်သူကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ဖယ်ရှားရေးကို လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ (ဇေယျာသော်ကို မဲပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်)…. (ပေးပါမယ်-လူထုများ)။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တေးသီချင်းများသီဆိုကာ ကြိုဆိုနေကြသော ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်မှ လူထုအား ယခုတွေ့ရစဉ်။ သူတို့သည် နံနက်ခြောက်နာရီကတည်းက ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
လိုချင်တာ ဒီမိုကရေစီ။ လူထုကောင်းစားရေးစနစ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်… ဟု ညီညာစွာ အော်ဟစ်နေကြသည်။ ဇေယျာသော်… နိုင်ရမည်။ အမေစုကိုထောက်ခံလို့.. ဇေယျာသော်ကို မဲပေးစို့… ဟူ၍ ဆက်လက်အော်ဟစ်နေသည်။
သူတို့အားလုံးသည် ဇေယျာသော်အားမဲပေးကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောနေကြသည်။ ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးဇင် စင်ရှေ့သို့ရောက်လာရာ ၀ိုင်းဝန်းအားပေးနေကြသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စောင့်ဆိုင်းနေကြသော ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ကျည်တောင်ကန်မှ လူထုအား ယခုနံနက် ၁၀ နာရီ ၅ မိနစ်ကတွေ့ရစဉ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကွင်းအတွင်း ၀င်ရောက်လာနေပြီဖြစ်သည်။ လူပေါင်း နှစ်သောင်းကျော်ရောက်ရှိနေကြ သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုဗ္ဗသီရိတွင် စတင်ဟောပြောနေပြီဖြစ်သည်။
ဦးဇေယျာသော်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘေးတွင် ယှဉ်ရပ်နေသည်။
နေပြည်တော် လူထု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တခဲနက်ကြို
တံတားဦးတွင် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ဒေသခံ လူထုကို ဟောပြောနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
မြန်မာအစိုးရခြေစိုက် နေပြည်တော်သို့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရန် ရောက်ရှိလာသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဒေသခံလူထုက တခဲနက် ကြိုဆိုကြသည်။
နေပြည်တော်ရှိ လစ်လပ်နယ်မြေလေးခုအနက် ပထမဆုံးအဖြစ် ဒက္ခိဏသိရီမြို့နယ်သို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် ရာတွင် ဒေသခံ လေးသောင်းကျော်က “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ၊ အောင်မြင် ပါစေ” ဟု ကြွေးကြော်သံ များဖြင့် သောင်း သောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြကြောင်း NLD ကပြောသည်။
“မလာခင်တုန်းကတော့ စိတ်ထဲမှာထင်မိတယ်။ ဒီ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်က ရွာသူရွာသားတွေက တော်တော်များတယ်ဆိုတော့ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ပါမလားတော့မသိဘူး။ နည်းနည်းများကြောက်ကြမလားလို့၊ ကျမကထင်မိတယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်က မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားသည်။
ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်တွင် လူထုစည်းရုံးရေး ဟောပြောရန်အတွက် ကွင်းပြင်ကျယ်များကို ငှားယမ်းရာတွင် ကန့်ကွက်မှုများနှင့် ကြုံရကြောင်း၊ သို့သော် ဟောပြောပွဲကို အနီးရှိ ရွာမကျေးရွာခံများသာမက အစိုးရဝန်ထမ်းများပါ လာရောက်ကြိုဆိုကြကြောင်း ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါသွားသူ သတင်းထောက် များက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဒက္ခိဏ သီရိမြို့နယ်တွင် NLD ပါတီက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးနိုင်ငံလင်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းမြို့နယ် သည် ပြီးခဲ့သော ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ၀န်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် ၏မဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်သည်။
နေပြည်တော်တွင် မြို့နယ် ၅ ခုရှိသည့်အနက်မှ လစ်လပ်နယ်မြေဖြစ်သော ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ် နှင့် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင် NLD က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်းမြို့နယ်များတွင် ပါတီစည်းရုံးရေးအတွက် ကွင်းပြင်များ ငှားယမ်းရာတွင် နှောက်ယှက်မှုများကြုံတွေ့နေရသကဲ့သို့ ပါတီ ဆိုင်းဘုတ်များကိုလည်း ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟု ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးဖြိုးဇေယျာသော်က ပြောသည်။
နေပြည်တော်မရောက်မီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မန္တလေးတိုင်းတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ပြုလုပ်ခဲ့သေးသည်။ ယင်းခရီးစဉ်ကို ယနေ့ နံနက် ၆ နာရီခွဲ့ခန့်တွင် သူတည်းခိုရာ မန္တလေးမြို့ Novotel Hotel မှ စတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက် တံတတားဦးမြို့နှင့် နွားထိုးကြီးမြို့များ၌ သောင်းနှင့်ချီသော ဒေသခံ လူထု ပရိသတ်များကို မဲအောင်နိုင်ရေး စည်းရုံးဟောပြောမှု များပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လမ်းခရီးတလျှောက် သောင်းနှင့်ချီသော ဒေသခံများက NLD အလံ အမှတ်တံဆိပ်ပါ အလံများဝှေ့ယမ်းကာ တခဲနက် ကြိုဆို၊ နှုတ် ဆက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသကဲ့သို့“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာပါစေ”ဟု ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသည်ဟု ခရီးစဉ်တွင် လိုက်ပါသွားသော သတင်းထောက် တဦးက ပြောသည်။
မွန်းတည့်ချိန်တွင် မိထ္ထီလာမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဒေသခံလူထု လေးသောင်းကျော်အား မိန့်ခွန်းပြောရာတွင် အကြောက်တရားကင်းကြ ရန် တိုက်တွန်းဟောပြောခဲ့ကြောင်း ယင်းမြို့နယ်၏ NLD ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်က ပြောသည်။
ယနေ့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တွင် နွားထိုးကြီးမြို့တခုမှလွဲ၍ ကျန်မြို့နယ်များဖြစ်သည့် တံတားဦး၊ မိတ္ထီလာနှင့် နေပြည် တော်တို့တွင် NLD က ခေတ္တငှားရမ်းထားသည့် အားကစားကွင်း၌ ခွင့်ပြုချက်မရရှိသဖြင့် လယ်ကွင်းများတွင် ဟောပြောခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အလားတူ စနေနေ့က မန္တလေး မြို့စည်းရုံးရေးခရီးစဉ်၌လည်း တောင်းဆိုထားသည့် အားကစားကွင်းတွင် ခွင့်ပြုချက်မရရှိသဖြင့် လယ်ကွင်းများကို ရှင်းလင်းကာ ဟောပြောခဲ့ရသကဲ့သို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းခရီးစဉ်တွင်လည်း မြစ်ကမ်းနဖူး သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် ဟော ပြောခဲ့ရသည်။
NLD ပါတီအနေဖြင့် ဧပြီ ၁ ရက်ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် နေပြည်တော် လစ်လပ် မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၄ ခု အပါအဝင် လစ်လပ်နယ်မြေ ၄၈ ခုလုံး တွင် ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
အဘနီရေ update news လေးတင်ချင်တာလွဲပြန်ဘီ။အသံဖိုင်တွေရော ဗီဒီယိုဖိုင်
အားမလျှော့ပါနဲ့ ။နောက်တခါရ အောင်တင်ပေးနော်။
ကျွန်တော်လည်း တွေ့တာ တင်ပေးလိုက်တာ အသံဖိုင်တော့ မလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်လည်း ……………..